အသည်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ | MM Cities
HomeBlogsMMcities's blogအသည်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Health & Beauty Apr 10,2017 1310MMcities
၁။ အရက်ကို အလွန်အကျွံမသောက်ပါနှင့်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် အသည်းရှိဆဲလ်များကို ထိခိုက်ပြီး ယောင်ရမ်းကာ အနာဖြစ်စေပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် အသည်းခြောက်ရောဂါဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိပါသည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ ညွှန်ကြားချက်အရ အမျိုးသားတစ်ယောက်က တစ်နေ့လျှင် အရက် နှစ်ပတ်ထက် ပိုမသောက်သင့်သလို အမျိုးသမီးကလည်း တစ်ပတ် ခန့်သာ သောက်သင့်ပါသည်။
၂။ သန့်ရှင်းလတ်ဆက်သော အစားအစာများ ပုံမှန်စားပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားလျှင် အရက်မသောက်ပဲ ဖြစ်တတ်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ အရက်မသောက်ပဲ ဖြစ်တတ်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်းသည် အသည်းခြောက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
၃။ အင်္ဂလိပ်ဆေးများကို အလွန်အကျွံ မမှီဝဲသင့်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ကိုလတ်စထရော လျော့ချသောဆေးများ ပါရာစီတမောများ အလွန်အကျွံသောက်သုံးလျှင် အသည်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အချို့သော ဆေးများသည် အရက်နှင့် ရောသောက်လျှင် အသည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ အချို့သော ဆေးများသည် တစ်မျိုးခြင်း အသည်းကို မထိခိုက်စေသော်လည်း ဆေးနှစ်မျိုးရောလိုက်လျှင် အသည်းကို ပျက်စီးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဆေးများကို ကျွမ်းကျင်သော ဆေးပညာရှင် ဆရာဝန်များနှင့်သာ တိုင်ပင်၍ သောက်သင့်ပါသည်။
၄။ အသည်းရောင် ရောဂါများမှ ကာကွယ်ပါ။ အသည်းရောင် ရောဂါများသည် အသည်းကို အလွန်အမင်းထိခိုက်စေပါသည်။ အသည်းရောင် အသားဝါ အေ၊ ဘီ နှင့် စီ ဟူ၍ ရှိပါသည်။ အသည်းရောင် အသားဝါ အေ သည် အစာနှင့်သောက်သုံးရေမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ပြီး ဘီနှင့်စီသည် သွေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သော အရည်များမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ပါသည်။
၅။ အဆိပ်များ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် အလွန်အကျွံမထိတွေ့ပါနှင့်။ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ကမ်မီကယ်ပါဝင်သော သန့်ရှင်းဆေးများ၊ ဆေးလိပ်အငွေ့ စသည်တို့သည် အသည်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
၆။ ကော်ဖီသောက်ပါ။ ကော်ဖီသောက်ခြင်းသည် အသည်းရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကို လျှော့ချနိုင်သည်ဟု လေ့လာချက်များအရ သိရှိရပါသည်။
အသားဓါတ်ကို အလွန်အမင်းစားသုံးတတ်သူဖြစ်လျှင် ထိန်း၍စားသုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသည်းရောဂါရှင်များတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော စွန့်ထွက်ပစ္စည်းများ အလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါသည်။ အသားဓါတ်နှင့် အချိုးတူ ဂဆီဓါတ်ကို တိုး၍စားပါ။ သတ္တုဓါတ်အားဆေးများ၊ ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆရာဝန်များညွှန်ကြားသော အသည်းအားဆေးများ ပုံမှန်သောက်ပါ။ ဆားအလွန်အမင်းစားသုံးခြင်းကို လျော့ချပေးပါ။ အစားအစာထဲတွင် အငန်ဓါတ်များ ရှိနေခြင်းသည် အရည်ဓါတ်ကို စုစည်းမှုများ ဖြစ်စေပြီး အသည်းရောင်လာစေပါသည်။
အသည်းအတွက် စားသင့်သော အစားအစာများ
ဒန့်ဒလွန် အညွန့်၊ ထောပတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ လက်ဖက်စိမ်း၊ မှို၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ သံပုရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ ပန်းသီး၊ စပျစ်သီး၊ သဘာဝအတိုင်းစိမ်းနေသော အသီးအရွက်များ၊ မုန်လာဥနီ၊ မုန်လာဥဖြူ၊ သံလွင်ဆီ၊ သစ်ချသီး စသည်တို့သည် အသည်းရောဂါရှင်များ အဓိက စားသုံးသင့်သော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။
ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို အင်္ဂလိပ်လို အနောက်စာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Liver isakey player in your body's digestive system. Everything you eat or drink, including medicine, passes through it. You need to treat it right so it can stay healthy and do its job.
Your liver is about the size ofafootball and sits under your lower ribcage on the right side. It helps clean your blood by getting rid of harmful chemicals that your body makes. It makesaliquid called bile, which helps you break down fat from food. And it also stores sugar called glucose, which gives youaquick energy boost when you need it.
1.Don't drinkalot of alcohol. It can damage liver cells and lead to the swelling or scarring that becomes cirrhosis, which can be deadly.
U.S. government guidelines say men should drink no more than two drinksaday and women only one.
2.Eatahealthy diet and get regular exercise. Your liver will thank you. You'll keep your weight under control, which helps prevent nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD),acondition that leads to cirrhosis.
3.Watch out for certain medicines. Cholesterol drugs and the painkiller acetaminophen (Tylenol) can hurt your liver if you take too much.
4.Learn how to prevent hepatitis. It'saserious disease that harms your liver. There are several types. You catch hepatitis A from eating or drinking water that's got the virus that causes the disease.
5.Don't touch or breathe in toxins. Cleaning products, aerosol products, insecticides, chemicals, and additives in cigarettes have chemicals that can damage your liver. Avoid direct contact with them, and don't smoke.
6.Drink coffee. Research shows that it can lower your risk of getting liver disease.
Dandelion root stimulates liver detoxification, helping clear toxins from the body. It also boosts digestion and improves gallbladder function. Dandelion tea also makesagreat caffeine-free alternative to coffee.
Bile, which isasubstance made in the liver, contains lecithin. This fat-like substance isamajor component of our cell membranes and plays an important role in fat digestion and supporting healthy nerve and brain function. Addingatablespoon of organic lecithin (made from soybeans) to your breakfast cereal or smoothies isagreat way to help support healthy liver function and digestion.
This highly nutritious fruit helps boost glutathione production, which is one of the body’s master antioxidants necessary for the liver to remove toxins from the body safely.
Consuming garlic regularly isagreat way to enhance liver function. It isagood source of selenium which is needed to produce glutathione in the liver, which is vital for detoxification to help eliminate toxic substances from the body.
This antioxidant rich tea can help improve liver function by protecting it from the harmful effects of toxic substances including alcohol. Catechin,apolyphenol found in green tea, has been found to help prevent inflammation of the liver.
Broccoli sprouts contain concentrated levels of sulforaphane,apowerful antioxidant that supports healthy liver detoxification. Broccoli sprouts contain anywhere up to 100 times more of these compounds compared to broccoli. Add fresh sprouts to meals, or add the powder to smoothies or fresh juices.
14.Beets and Carrots